Lego Speed Champions 76902 McLaren အဲလ်ဗာပြန်လည်သုံးသပ်
15 / 05 / 2021 03 / 06 / 2021 ရော့ Paton 726 Views စာ0မှတ်ချက် 76902 McLaren အဲလ်ဗာ, 76905 Ford GT Heritage Edition နှင့် Bronco R, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Speed Champions, McLaren, McLaren အဲလ်ဗာ, Mclaren p1, Mclaren senna, reviews
ပို၍ ထူးခြားသောကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Speed Champions ယူရန် 76902 McLaren အဲလ်ဗာ ဆောင်ပုဒ်နှင့်ပတ်သက်။ ကြီးသောအပေါငျးတို့သပါဝင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုကို ၂၄၉ အထိထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် Lego ထိတ်လန့်စရာမလိုပါ၊ McLaren Elva သည်အင်ဂျင်နီယာ၊ ခေါင်မိုးမဲ့အားကစားကားတစ်စီးဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုအပေါ့ဆုံး McLaren အဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ သူတို့၏ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ထားသည့်လမ်း-တရားဝင်မော်တော်ယာဉ်နှင့်ကုမ္ပဏီ McLaren Ultimate စီးရီးတွင်ပဉ္စမနေရာဖြစ်သည်။ F1, P1, Senna နှင့် Speedtail တို့ကိုလိုက်နာသည်။
ငါတို့ P1 နှင့် Senna ပြီးသားဖြစ်ပြီ Lego Speed Champions အဲလ်ဗာကိုအုတ်လောကထဲကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာကိုမြင်ရတာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ထို့နောက်အလွန်အကျွံကျွမ်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အတူ Lego McLarens ၏စိတ်ထဲတွင်ခေတ်သစ်အားကစားကားဒီဇိုင်းသို့ထူးခြားစွာ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာသည်လည်းထပ်တူထပ်မျှမျက်စိကျစရာနှင့်ကွဲပြားခြားနားစေသည် Lego အစုံ
- အသေးစိတ်သတ်မှတ်ပါ -
theme: Lego Speed Champions အမည်သတ်မှတ်မည် - 76902 McLaren အဲလ်ဗာ ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 အပိုင်းပိုင်း: 263 အသေးစားပုံများ: 1
- တည်ဆောက်ပါ -
p တစ်ခုရှိတယ်artအဆောက်အ ဦး အတွက် icular ခြေလှမ်း 76902 McLaren အဲလ်ဗာ ကြောင်းperfectlyုံသို့ဝင်သောထူးခြားသောတီထွင်ဖန်တီးမှု၏ဝိညာဉျကိုကြုံးဝငျပတျသကျ Speed Champions။ နောက်မီး၏တစ်ခုချင်းစီအတွက် Elva သို့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ပုဆိန်ဓါးတစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းကိုမော်တော်ယာဉ်နှင့်ထိပြီးထိပုတ်ပါကတဆင့်ချိတ်ဆက်ရန်စဉ်းစားထားသည်။
နောက်ကွယ်မီးသည်ထူးခြားစွာပုံဖော်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် Lego ပုံစံကသူတို့ကိုပုံတူပွားနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သျောလညျးပုံမှန်နှင့်မျှမျှတတဘုံအပိုင်းအစနှစ်ခုကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ခြင်းက၎င်းကိုအတိအကျပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောအစုံလိုက်ဖက်သောဒီဇိုင်းဆိုင်ရာစံနမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego Speed Champions ကမ်းလှမ်းမှုများ။ Build smartကွဲပြားခြားနားတည်ဆောက်။
ဤသည်သည်အလွန်ထူးခြားသောကားတစ်စီးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအနည်းငယ်သည်ကြိုတင်ပုံရိပ်များစွာကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ Lego ပုံစံသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအုတ်ပုံစံကိုဖန်တီးသည်။ ၎င်းသည်ယူရန်အလွန်များပြားသောကြောင့်စစ်မှန်မှုအပေါ်စစ်မှန်သောစိစစ်ရန်နေရာအနည်းငယ်သာကျန်ရှိစေသည်။city ၎င်း၏ဒီဇိုင်း၏။
၎င်းသည်အပြာရောင်အားလုံးနှင့်အရောင်တောက်ခြင်းသည်ကားကိုယ်ထည်အရပုံသဏ္acrossာန်၊ ထောင့်နှင့် ဦး တည်ချက်အပြောင်းအလဲများကိုများစွာဖုံးကွယ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကားကိုအခြားမည်သည့်ကားနှင့်မဆိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ Star Wars Speeder, ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာများစွာသော smouflouagesart ဒီဇိုင်းအလုပ်။ အဲလ်ဗာသည်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအလေးအနက်ထားရန်ခဲယဉ်းသော်လည်း၊ ဒါဟာလုပ်စရာတစ်ခုပဲ Lego art များစွာသောနည်းလမ်းများစွာအတွက်ပဲအားလုံးအပြာရောင်။
အမှန်မှာ၊ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအတက်အကျများသည်အလွန်တိကျစွာရိုက်ကူးထားသောအရာများဖြစ်သည် Lego ဒီမှာပုံစံ။ ၂၀၂၁ နွေရာသီလှိုင်းတွင်ပါဝင်သောအခြားကားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ Speed Champions Hyper-design ၏တူညီသောအဆင့်သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ၁၀၀% တိတိတိကျမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကားမဟုတ်ပေမယ့်စိတ်ချရအောင်လုပ်ထားသည့်စစ်မှန်သောလေကိုပြသည်city ကား၏ရှေ့ဆုံးကိုပုံသွင်းခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းမှသည်တံခါးပေါက်တစ်ခုစီ၏နောက်ဘက်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလေဝင်လေထွက်ရှိသည့်ကိုယ်ထည်၏ဘေးထွက်များအထိမှန်ကန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုဖမ်းယူရန်အတွက်။
ကားသည်အမိုးမရှိသောကြောင့်အတွင်းပိုင်းသည်အခြားအရာများထက်အသေးစိတ်အာရုံစိုက်ခြင်းမှအကျိုးရှိသည် Speed Champions အစုံလိုက်ထိုင်ခုံများသည်သူတို့တကယ့်အရာနှင့်မည်ကဲ့သို့ကြည့်နေသည်၊ စတီယာရင်နှင့် dashboard ap နေရာချခြင်းartတည်ဆောက်စဉ်အတွင်းခံစားရကျိုးနပ် icular အသေးစိတ်။
- ဇာတ်ကောင်များ -
ထည့်သွင်းထားသော minifigure သည်တိကျမှုမရှိသော်လည်းပုံသဏ္nonာန်အမျိုးမျိုးရှိသော McLaren အပြာရင့်နက်မှအပြာရောင် McLaren ကိုယ်ထည်နှင့်အတူပါလာသည်။
- စျေးနှုန်း -
ရှစ်လုံး - ကျယ်ပြန့်နေတုန်း Lego Speed Champions ဆောင်ပုဒ်၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ဘောင်တစ်ခုလုံးတွင်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဈေးလည်းတက်လာသည်။ သို့သော်သူတို့အခြေခံထားသည့်တကယ့်ကမ္ဘာ့ကားများ၏အနှစ်သာရကိုအမှန်တကယ်ဖမ်းယူနိုင်သည့်ကားများအတွက်၎င်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောစျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 76902 McLaren အဲလ်ဗာ.
သင့်ရဲ့အခြားကားမရှိဘူး Lego Speed Champions အစဉ်အဆက်ဤကဲ့သို့သောအစဉ်အဆက်လိမ့်မည်ဟုစုဆောင်းမှု, နှင့်၏အရေအတွက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဟာဆက်စပ်သောပါပဲ Lego McLaren ကားများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်များ၌ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။ အသွင်အပြင်သဏ္uniqueာန်တူသောအရာအားလုံးအတွက်၎င်းသည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်မည်မျှပျော်စရာကောင်းသနည်း။ သာအရောင်အစီအစဉ်ကိုအနည်းငယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့လျှင်။ McLaren က Ford GT Heritage မှ Gulf Livery ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် 76905 Ford GT Heritage Edition နှင့် Bronco R တစ်စုံတစ် ဦး ကတည်ဆောက်လိုလျှင်ဝင်, ...
- ရုပ်ပုံများ -
- အကျဉ်းချုပ် -
McLaren Elva သည်ပျော်စရာပျော်စရာကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည် Lego တည်ဆောက်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Speed Champions ဖန်တီးသည့်အခါအဖွဲ့ကနှုတ်ဆက်ပြီးခဲ့သည် 76902 McLaren အဲလ်ဗာ, အပြာရောင်အပြာရောင်အရောင်ရှိသော်ငြား bodywork တွင်လှည့်ကွက်များနှင့်အလှည့်များကိုများနိုင်သမျှများများဖမ်းယူရန်ကြိုးစားနေသည်။
၂၄၉ စီးအကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိနိုင်သောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကားသည်အလားတူစိတ်ဝင်စားဖွယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြုလုပ်သည် Lego ကားတစ်စီးနှင့်တစ် ဦး ထဲကထဲကထွက်ခွာရန်မ Speed Champions စုဆောင်းမှု။
ဒီအစုံဟာအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည် Lego Group မှ။
သငျသညျထိုအလုပျကိုတိုက်ရိုက်ထောကျပံ့နိုငျသညျ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
- မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ -
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Speed Champions 76902 McLaren အဲလ်ဗာ?
ဒါဟာပျမ်းမျှယူပါလိမ့်မယ် Lego အတူတူထားရန်နာရီဝက်ပတ်လည်ဆောက် 76902 McLaren အဲလ်ဗာ။ ၎င်းသည်ကားတစ်စီးတည်းသာဖြစ်သည်၊ သို့သော်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပြည့်ပြည့် ၀၀ နှင့်မပြည့်စုံသေးပါarticular တည်ဆောက်အချက်များ။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Speed Champions 76902 McLaren အဲလ်ဗာ?
263 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 76902 McLaren အဲလ်ဗာကားသည် ၂၀၂၀-၂၁ မှ ၂၁၀ အတွင်းအခြားအချို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်သေးငယ်သည်၊ Lego Speed Champions အကွာအဝေး။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Speed Champions 76902 McLaren အဲလ်ဗာ?
76902 McLaren အဲလ်ဗာ အရှည် ၁၆ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၇.၅ စင်တီမီတာနှင့် ၄.၅ စင်တီမီတာအရှည်ရှိသည်။ Lego Speed Champions အစုံ။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Speed Champions 76902 McLaren Elva ကုန်ကျသလား
76902 McLaren အဲလ်ဗာ ဥရောပတွင်ယူရို ၁၉.၉၉၊ ယူကေတွင်ပေါင် ၁၇.၉၉ နှင့်ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၉.၉၉ - ၂၀၂၀ ကားတစ်စီးနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
← နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ် - ဖြည့် LEGO Friends နွေရာသီအစုကိုတွေ့ပြီ
LEGO NINJAGO Reimagined နှင့်အတူဂီတစွန့်စားမှုတစ်ခုကိုစတင်ပါ →
Tiro Media Ltd ၏ထက်ဝက်အနေဖြင့်ပုံနှိပ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကို LEGO ၏နက်ရှိုင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ကျွန်ုပ်ရောထွေးခဲ့ပြီး LEGO အကြောင်းကိုမကြာခဏတွေ့ရသည်။ Batman, သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူး LEGO GroupLEGO ၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ညည်းညူခြင်း Star Wars အစုံ EXO-FORCE ကိုအချိန်ကာလ၏အကြီးမားဆုံး LEGO ဆောင်ပုဒ်အဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသောအခါအလွန်စွဲမှတ်သွားပါ။ တွစ်တာတွင်ကျွန်ုပ်နောက်သို့လိုက်ပါ @RobPaton သို့မဟုတ်ငါ့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင် drop [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]